Milaza ny solombavambahoaka iray avy ao Kazakhstan fa taratry ny fiainana andavanandron’ny firenena ny ‘Squid Game’ · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny politisiana fa tsy hay tantanina ny olana ara-bolan'ny firenena
Voadika ny 22 Oktobra 2021 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Italiano, Français, Español, English
Karatra mahatsikaiky nomena ireo mpandray anjara amin'ny Squid Game. Pikantsary avy amin'ny horonantsary fampahafantarana tao amin'ny YouTube-n'ny Netflix.
Nilaza ny tolotra mpandefa horonantsary mivantana malaza Netflix fa lasa seho be mpijery indrindra ao amin'ny sehatra ilay andiana tantara, Squid Game noforonin'ilay mpanatontosa koreana Hwang Dong-hyuk. Niteraka resabe amin'ny ateraky ny fitongilanan-drafitra ara-toekarena mahatonga ady mahafaty hiavotan-tena ity tantara mitohy mampiseho ireo mpilalao miangana eo amin'ireo mponina vesaran-trosa any Korea atsimo ity.
Nilaza i Aikyn Konurov, mpitarika ny Antokom-bahoaka ao Kazakhstan izay mpikambana ao amin'ny parlemanta fa misy eo amin'ny fiainana tena izy ny fifaninanana mampivarahontsana Squid Game, satria miezaka miady ao anatin'ny trosa sy ny firongatry ny fahantrana ny olona ao Kazakhstan.
“Misy manerantany ireo olana ireo. Nilalao ity lalao ity hatramin'ny ela ireo Kazakhstaney,” hoy i Konurov nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety.
Teraka tamin'ny taona 2004 avy amin'ny fivondronan'ny ampahany tamin'ny Antoko Komonista sy ny Antokom-bahoaka ny Antokom-bahoaka ity Antokom-Bahoaka ity. Nantsoina hoe Antokom-bahoaka Komonista izy io mandra-pahatonga ny Novambra 2020, rehefa nanapa-kevitra hanala ny fiantsoana “Komonista” ireo mpikambana.
Tamin'ny fifidianana tamin'ny volana janoary 2021, nahazo toerana 10, betsaka indrindra azony hatramin'izay, ny antokom-bahoaka ao anatin'ny parlemanta ahitana mpikambana 107, raha noraofin'ny antoko Nur-Otan nanjaka hatry ny ela ny ampaham-bato maro.
Nanameloka ny fahatezerana sy ny fipoahan'ny herisetra i Konurov – tahaka izany ny fitifirana izay niantefa tany amin'ireo vadin-tany teo am-pakàna ny trano tamin'ny volana septambra – nanaovana fampanjanaham-bola. “Marary ny rafitra ara-bola eto amintsika, miteraka tsy fahafaham-po izany, miteraka fihenjanana ara-tsosialy izany,” hoy izy.
Raha ny filazan'ny Banky foibe ao amin'ny firenena, nitombo 17 isanjato ny trosan'ny olona tsirairay tao anatin'ny fito volana voalohany taona 2021. Nilaza tamin'ny tatitra ny Fikambanana Ara-bola any Kazakhstan, vondrona iray mpanao lobby fa nitombo be tao anatin'ny telo taona ny portfolio fampindramam-bola an'ny banky ara-barotra.
Tao anatin'ny fanambarana niarahana tamin'ny Kaonfederasionan'ny Mpiasa, fikambanana sendikan'ny mpiasa, niantso ny governemanta Kazakhstan ny Antokom-bahoaka mba hankatoa ny Fifanarahana 131 an'ny Fikambanana Manerantanin'ny Mpiasa izay mifehy ny karama farany ambany.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny tranonkalam-baovao Orda.kz, nilaza i Konurov fa hotakin'ny Antokony ny hampiakaran'ny governemanta ny karama farany ambany ho 90.000 tenge (eo amin'ny 210 dolara amerikana) izay 42 500 tenge (manodidina ny 100 dolara amerikana) isam-bolana amin'izao fotoana. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nampanantena fiakarana 40 isanjato hatramin'ny 60000 tenge ny filoha Kassym-Jomart Tokayev manomboka amin'ny volana Janoary 2022.
Navoaka tao amin'ny tranonkala fanangonan-tsonia Avaaz.org ny fampielezan-kevitra hampiakatra ny karama farany ambany, antsoina hoe “Ho an'ny karama mendrika!”. Nahangona sonia 300 teo ho eo izany, mbola ho ela vao hahatratra ny 10.000 nampanantenain'ny antoko nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Tamin'ny volana septambra, nanolotra volavolan-dalàna ho an'ny parlemanta ny Antokom-bahoaka izay hametraka ny fitsipiky ny bankirompitry ny olona iray, izay hanova ny fitsipika fanoloran-tena amin'ny fandoavan-trosa. Raha mbola eo am-pandinihana ny lalàna, milaza ireo mpanolotra izany fa, amin'ny fiarovana toy izany, dia tsy azo esorina amin'ny olona tsirairay ny tranony. Taorian'ny fitifirana namoizana ain'olona tany Almaty, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, nambaran'ny solombavambahoaka fa antony nanosika ny fitifirana ny “fampanjanahana” amin'ny fandoavana trosa.
Tao anatin'ny fanesoana ny politika “fanjakana mihaino” an'i Tokayev tamin'ny taona 2019, politikan'ny varavarana misokatra mangarahara notokanan'ny filoha vaovao tamin'ny volana Jona, nandefa fitaovana fanampiana fihainoana sy solomaso nosoratan'ny dokotera hanaovana ho an'ireo mpikamban'ny governemanta ny Antokom-bahoaka. Fihantsiana izany hanosika ny governemanta hanatanteraka ny fampanantenany sy hihaino ary hijery akaiky ny olan'ny vahoaka, hoy ireo solombavambahoakan'ny antoko.
Na dia tsy tahaka ny famonoana olona mahatsiravina aseho ao amin'ny Squid Game aza ny fandehan'ny fiainana ao Kazakhstan andavanandro, ny fanekena tsy fahita firy fa lasa nihanaka be hatrany manerana ny firenena ny tsy fitoviana sy ny fahantrana dia angamba fanakianana ara-tsosialy mitombina avy amin'ny mpanohitra ara-politika saro-kenatra ara-tantara.
Tao Ozbekistan mpifanila vodirindrina aminy, nipoitra avy amin'ny fantsona Telegram malaza, Troll.uz, mpizara sary namboarina avy amin'ny iray tamin'ireo lalao nolalaovana tamin'ity andian-tantara ity, ny karazana fitsikerana ara-tsosialy hafa manasongadina ny fahasoratan'ny ho vahaolana any Ozbekistan.
Ao anatin'ity andian-tantara ity, mahita ireo mpilalao sasany fa ny vahaolana amin'ny rarinteny sarotra dia ny milelaka ny ao ambadiky ny biscuit. Nampiasaina ho fanoharana amin'ny toe-javatra mampiavaka an'i Kafka ao amin'ny firenena, “raha te-handresy, dia tsy maintsy milelaka tsara ianao” ity fotoana amin'ny seho ity.
Ny fomba fandraisana ity andiany dystopiana Netflix ao Azia Afovoany ity dia manondro fa niharatsy ny toe-karena sy ny sosialy tato anatin'ny taona vitsivitsy ary miha bokan'ny trosa ny vahoaka.